Accueil > Gazetin'ny nosy > Ministeran’ny Vola : Tsy maintsy ny Rainizafimanga sy ny “diaspora” ve ?
Ministeran’ny Vola : Tsy maintsy ny Rainizafimanga sy ny “diaspora” ve ?
Miteraka olana lehibe ao amin’ny mpiasa sy ny mpomba ny fitondrana Andry Nirina Rajoelina ao amin’ny ministeran’ny vola ny mahakasika ny fanendrena izay olona ho tale jeneralin’ny fadin-tseranana sy ny talen’ny hetra. Ireo sehatra roa ireo no azo lazaina fa mampiditra vola be indrindra eto amin’ny firenena hatramin’izao ka ilaina fifehezana mafy. Tsy izany ihany nefa fa mbola ao koa izany tantara hatramin’ny fahagolan-tany izany ka raha miresaka momba ny vola eto Madagasikara dia tsy azo ialana ny fianakaviana ny Rainizafimanga. Ialana tsiny ny filazana anarana firazanana eto, saingy izay no tantara dia tokony ho fantatry ny maro sy ny vahoaka Malagasy izany araka ny voalazan’ny lalàmpanorenana, satria zon’ny rehetra no tokony hahalala vaovao. Koa ho an’ireo tehahafantatra bebe kokoa ny amin’izany dia tokony hanao fanadihadiana mahakasika izany izy ireo satria izany no nisy tamin’ny tantaram-pirenena Malagasy.
Marihina etoana fa resabe ao amin’ny tontolon’ny ministeran’ny Vola ankehitriny ny olona izay hatao tale jeneralin’ny ladoany sy ny talen’ny hetra. Tsorinay avy hatrany fa maro no mimenomenona amin’ity raharaha ity satria mandeha dia mandeha ny resaka fa tsy maintsy olona avy amin’ny taranak’i Rainizafimanga hono no hatao tale jeneraly ao amin’ny ladoany. Dia hoy izay hoe: koa maninona moa raha toa ka mahafeno ny fepetra amin’izany izy ?
Misy indray nefa no milaza fa misy ny olona izay manana traikefa sy ampy tsara lavitra noho izany ny fahaizany no tokony hatao amin’ny toerana io raha ny filazan’ny mpiasa ihany ao amin’ity ministeran’ny vola ity. Mampitandrina avy hatrany ary ny mpiasan’ny ladoany ireo fa aoka mba hijery tsara ny tombotsoan’ny firenena sy ny mpiasa no hamaritra ny fanendrena ireo olona ireo.
Tsy ny Rainizafimanga ihany no voaresaka ao amin’ny mpiasan’ny ministeran’ny Vola ao fa hatramin’ny fanomezana vahana ny “diaspora” izay mpifindra monina avy any ampitandranomasina ka efa sahirana amin’ny antsojay ataon’ny vazaha, ka mitady toerana hiasana eto Madagasikara indray. Dia manao ankisisika izay tsy izy eo akaikin’ingahy Andry Nirina Rajoelina mba hahazo asa indray. Dia ireny iarahana mahita ireny ny fihetsiketsehana ataon’ireo olona ireo nefa tsy mahalala akory izay tetezan’i Bekiraro sy Beroroha. Mandeha ny resaka fa misy izany Lalaina izany indray avy any Canada any hampitantanana ity toerana lehibe ity nefa tsy nianatra mikasika ny vola akory. Be dia be nefa ny inspektora izay manana traikefa ao amin’ny ministera no odia tsy hita na dia nifofotra mafy amin’ny asa fampandehanana ity ministera ity hatramin’izay. Milaza ny tsy hanaiky ity fanilikilihina ity izy ireo ka ho hitan-tsika ny tohiny.
Marihinay fa misy mpiasa tsotra izy ireo no mitaraina ary misy koa mpikambana amin’ny sendika.
Tsy ireo roa ireo ihany, dia ny Rainizafimanga sy ny diaspora no fepetra takiana ankehitriny hitantana ny mahakasika toerana ambony amin’ny ministeran’ny vola ao fa mbola jerena koa hono raha toa ka “franc maçon” ilay olona. Dia mbola resaka be koa izy io satria maro no milaza tsy tia azy nefa maro ny Malagasy ao anatin’izany fikambanana iraisam-pirenena te hifehy ny fitondrana manerana izao tontolo izao izany. Izay no tanjon’ity “franc maçon” ity ka manao ny fomba rehetra hahazoana izany izy ireo amin’ny firenena izay ananany mpikambana.
Rehefa tsy ao anatin’ireo sokajin’olona ireo hono dia aza mieritreritra ny hitantana ao amin’ity ministera ity. Dia izany no ady hevitra mavaivay ankehitriny ka ho hitantsika ny fivoarany.
Mahakasika ny “diaspora” dia mbola resabe ankehitriny ny momba ny fanendrena an-dRakotondrasoa Miandry izay lasa DLCF ao amin’ny sampan-draharahan’ny hetra. Ity olona ity izay isan’ireo olona nampanao “entretien” ho amin’io toerana io, nefa dia nahagaga fa izy indray no nahazo ny toerana. Dia avy amin’ny fitenenana hoe “mandidy dia mihomana” ny raharaha satria sady mpitsara no mpiadina ary nahazo ny toerana.
Ahitana zavatra maro misafotofoto amin’ny fanendrena mpiasam-panjakana ambony eto Madagasikara ankehitriny. Tsy araka ny nanampoizana azy ny nataon’ny fanjakana Andry Rajoelina. Sady tsy manaraka ny fenitra ara-pôlitika no tsy manaraka ny fomba fanao amin’ny fandraisana mpiasam-panjakana koa. Tsy misy firenena ka manao “appel à manifestation” izany raha hitondra firenena hampiditra mpiasa satria resaka pôlitika tanteraka izany. Ny orinasa tsy miankina tsy manao politika no ahitana izany.
Vokatr’izao raharaha tsy manjary ataon’ny fanjakana izao dia ny olon’ny HVM ihany no voatendry mitondra amin’ny fanjakan’ingahy Andry Nirina Rajoelina toa ny mitranga amin’ny ministeran’ny Fambolena ankehitriny. Mpitantana tamin’ny HVM daholo no avadibadika ny toerany dia hoe fanjakan’i Andry Rajoelina hono. Koa inona no nilaina ny fanovana raha toa ka izany no zava misy.
Dia mbola izany koa no mitranga amin’ny fifidianana depiote amin’izao fotoana izao. Olon’ny HVM (Hery vaovao ho an’i Madagasikara) izay olon’ingahy Hery Rajaonarimampianina avokoa no ankamaroan’ny kandidan’ingahy Andry Nirina Rajoelina ankehitriny. Azo lazaina fa ny zavatra nataon’i Voahangy Rajaonarimampianina ihany no misy amin’izao fotoana izao.